Maaskaro Caqli leh Oo Hadlaya! | Xaqiiqonews
Maaskaro Caqli leh Oo Hadlaya!
Shirkad Jabaanees ah ayaa soo hindistay “maaskaro caqli leh” kaasi oo lagula xiriirin karo internetka, arintani ayaa imaaneysa xilli dunida ay la dhibaatooneysa mushkiladda karoona Fayrus.
Shirkadda Jabaaneeska ah ee Donut Robotics, ayaa soo saartay maaskaro awood u leh in ay hadasho oo ay tilmaamo siiso qofka xirnaya, arintaasi oo ah muhiim ah madaama dunida ay la dhibaatooneysa xanuunka ka dhashay fayruska karoona.
Waxyaabaha ku cusub maaskarahan waxaa ka mid ah maaskaraha in uu awood u leeyahay in uu u tarjumo luuqadda jabaan ilaa sidee luuqad oo kale oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Shiinaha, Isbaanishka, Faransiiska, Kuuriya, Fiitnaamka, Indoniisiyaanka iyo luuqadda Thailand.
Sidoo Kale Aqri..Ikhtiraac Cusub..Ookliyaale Caqli leh Oo Garanaya Dambiilayaasha!
Shirkadda soo saartay maaskaraha ayaa xustay in maaskaraha uu ka sameysanyahy caag midib cadaan ah leh, 5-ta kun xabo ee ugu horeysana in laga heli doono suuqyada Jabaan bisha Septembar ee soo socota.
Aasaasaha shirkadda sameysay maaskarahan caqli leh, Taesuk Ono, ayaa carabka ku dhuftay in shirkadda maaskarahan u suuq geyn doonto Shiinaha, Mareykanka iyo Yurub oo “arintani laga daneynaayo” sida uu hadalka u dhigay.
Qiimaha halkii maaskaro ayaa gaaraya $40 doolarka Mareykanka ah
Qofka adeegsanaya maaskarahan ayaa ablikeeshin ka iibsanaya Internetka si uu uga shaqeysiiyo maaskaraha.